चलचित्र ‘प्रसाद’मा हेर्नलायक ५ कुरा - Kendrabindu Nepal Online News
चलचित्र ‘प्रसाद’मा हेर्नलायक ५ कुरा
चलचित्र ‘प्रसाद’ भोलि (शुक्रबार) देखि देशभरका सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुँदैछ । फिल्ममा निःसन्तान दम्पतीको आरोह अवरोहरुलाई देखाउन खोजिएको छ । कमेडी फिल्मले फिल्मी बजारमा दर्शक तानिरहेका बेला चलचित्र ‘प्रसाद’ फरक खुराक बन्न सक्छ । चलचित्रमा निर्देशक दिनेश राउतले केही जोखिम मोलेका छन् । उनले सामाजिक तथा पारिवारिक कथामा ‘फिल्मी लेपन’ लगाएका छन् ।
‘प्रसाद’ फिल्मको कथाको कुरा गर्ने हो भने निर्देशक दिनेश राउतले इन्टरटेन्टमेन्टसँगै सामजिक सन्देश दिने कोशिस गरेका छन् । कथाबस्तु एकदमै मौलिक, मार्मिक र स्वभाविक छ । प्रसाद यस्तो फिल्म हो जसले सामाजिक विषयबस्तु र मानवीय संवेदनालाई पर्दामा उतार्ने प्रयास गरेको छ । जुन समाजमा सबैले देखिरहेको र भोगिरहेको समसामयिक विषयलाई निर्देशकले कुशलताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । हाम्रो समाजमा निःसन्तान दम्पतीले भोग्नुपर्ने पीडा, छुवाछुत र कथित तल्लो जातसँग बिवाह गर्दा गाँउ नै छोड्नुपर्ने बाध्यतालाई वास्तविक र एकदमै कलात्मक ढंगले देखाइएको छ । फिल्ममा नेपाली समाजमा भएका अनेकौ विकृती र विसंगतीहरुलाई सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
२. अभिनय र पात्र
फिल्ममा कलाकारहरु हावी भएका छैनन् । फिल्म अवधिभर दर्शक भड्किदैनन् । विपिन कार्कीको अभिनय एकदमै बलियोे छ । उनको एक्टिङ वास्तवमा एक्टिङ जस्तो लाग्दैन् । फिल्ममा विपिन नै सर्वेसर्वा जस्तै देखिएका छन् । उनले फिल्मको गतिलाई राम्रोसँग पकडेका छन् । यो फिल्ममार्फत नम्रताले लामो समयपछि कमब्याक गरेकी हुन् । उनको अभिनय सुरुवातमा सामन्य लागे पनि पछि राम्रो अभिनय गरेकी छिन् । उनले विवाहित महिलाको भूमिका एकदमै इमान्दिारितापुर्वक निभाएका छन् । फिल्ममा निश्चल बस्नेतको अभिनय सामान्य छ । उनले स्क्रिनमा विपिनले भन्दा कम समय दिए पनि उनको भूमिका बलियो र सान्दर्भिक लाग्छ । फिल्ममा सिमित पात्र छन् । यो फिल्मको राम्रो पक्ष हो । फिल्ममा अनावश्यक पात्रको भिडभाड छैन् ।
३. नम्रता र विपिनको केमेष्ट्री
नम्रता र विपिनले पहिलो पटक अनस्क्रिन जोडी बाँधेका हुन् । उनीहरुको जोडी निःसन्तान दम्पतीको रुपमा र कथित तल्लो जातको जोडीको रुपमा गज्जब सुहाएको छ । विपिन उनको भूमिका अनुसारको गेटअपमा एकदमै खुलेका छन् ।
४. मेकिङ राम्रो
फिल्ममा कलाकारलाई सही रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्मको अवधिभर दर्शकले भरपुर मनोरञ्जन गर्न सक्छन् । मानवीय संवेदनालाई कलात्मक रुपमा देखाइएको छ । मध्यम वर्गिय पारिवारीक अवस्था र काठमाडौंको डेराको बसाई एकदमै वास्तविक लाग्छ । फिल्मको पात्रहरुलाई एक अर्कासँगको भेटलाई राम्रोसँग जोडिएको छ । कलाकारहरुलाई स्थापित गर्न धेरै मेहनत गर्नु परेको छैन् । एकाध कलाकारले फिल्म धानेको छ । ड्रेसअपदेखि डेराको बसाई र गाउँले जीवनलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ ।
५. संवाद, पार्श्व ध्वनी, सिनेम्याटोग्राफी
संवाद, पार्श्व ध्वनी, सिनेम्याटोग्राफी राम्रो छ । फिल्मको ‘सेन्स अफ ह्युमर’ राम्रो छ । कतिपय फिल्ममा जस्तो यो फिल्ममा दोहोरो अर्थका संवाद र चुट्किलाहरु सुनाएर दर्शकलाई जर्बजस्ती हास्न बाध्य बनाएको छैन । कथामा इमोसनलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । दर्शकलाई छिनमै हसाउने र छिनमै भावुक बनाउन सक्ने क्षमता छ । संवाद एकदमै सान्दर्भिक लाग्छ । बोल्ने शैली र म्युजिक एकदमै राम्रो छ । गीतलाई जर्बजस्ती बनाइएको छैन् । कतिपय बिम्बको प्रयोग राम्रो छ । उल्टो जुत्ता, उल्टो इस्टकोट , पानी परेको दृश्यलाई बिम्बको रुपमा प्रयोग गरिएको छ जसले गर्दा फिल्मलाई गहकिलो बनाएको छ ।
फ्राइडे फिल्म: नम्रता र झरनाको प्रतिस्पर्धा
चलचित्र प्रसाद हेर्न नेपाल आइडल टिम हलमा ( भिडियो सहित )